Njikwa Mgbasa Ozi LinkedIn wepụtara Ahụmahụ Mgbasa Ozi Ọhụrụ Ọhụrụ | Martech Zone
LinkedIn na-ekwuputa ahụmịhe akụkọ na-emezigharị maka Njikwa Mgbasa Ozi LinkedIn, na-eme ka ọ dị mfe ịghọta otú mkpọsa gị si arụ ọrụ. Ọhụrụ interface na-anapụta a dị ọcha ma kensinammuo ahụmahụ na-ahapụ gị mfe mfe jikwaa na-ebuli gị mkpọsa.
Mmezi Njikwa Mgbasa Ozi Njikọ Gụnyere:
Chekwaa oge na mkpesa mkpọsa - Site na ahụmịhe akụkọ ọhụrụ a, ị ga - ahụ ngwa ngwa ka mkpọsa gị na - arụ ma na - emegharị na ntanetị iji melite nsonaazụ. Data na Mgbasa Ozi Mgbasa ozi ugbu a na-ebu 20 pasent ngwa ngwa, na-enye gị ohere i toomi data n'ụzọ dị irè karị - ọbụlagodi na ị nwere ọtụtụ narị mkpọsa na ihe okike. Ọzọkwa, usoro nab ọhụrụ na-enye gị ohere ịgbanwe site na akaụntụ gaa na mkpọsa na mgbasa ozi na clicks abụọ. Anyị nwekwara emelitere na search ike, n'ihi ya, ọ na-ewe sekọnd ole na ole ịjụ ụfọdụ mkpọsa site aha mkpọsa, mkpọsa ID, ad format na ndị ọzọ.
Ghọta arụmọrụ mkpọsa ma bulie ọkụ - Mgbe mgbasa ozi gị anaghị arụ ọrụ nke ọma, ị kwesịrị ime ihe ọsọ ọsọ ka ịzie ya. Ọ bụ ya mere anyị ji tinye atụmatụ ọhụrụ iji nyere gị aka ịme mkpebi mkpọsa ọsọ ọsọ karịa oge ọ bụla. Ahụmịhe ọhụụ ọhụụ gosipụtara atụmatụ 1-pịa nkwụsị na-enye gị nghọta miri emi banyere isi ihe ngosi dị ka ihe ntụgharị na ntinye na LinkedIn Audience Network.
Hazie ahụmịhe mkpesa gị - Nwere ike ịhọrọ ma họrọ metrik elere anya na ị nwere mmasị karịa, ma ọ bụ arụmọrụ, ntụgharị ma ọ bụ vidiyo.
Dabere na LinkedIn, mwepụta a bụ naanị ihe mbụ na atụmatụ ngwaahịa ogologo oge.
Ẹkedori a LinkedIn Ad
Tags: linkedin ad akukolinkedin mgbasa ozinjikọ mgbasa ozinjikwa njikwa njikọ